मानिसहरू भगवान्‌लाई किन पुकार्छन्‌?
प्रहरीधरहरा | अप्रिल २०१४
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उज्बेक उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टुभालुअन डच डाँग्मे डेनिश त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज मले माया मालागासी माल्टिज मिजो मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
आवरण लेख | भगवान्‌लाई किन पुकार्ने?
तपाईंले भगवान्‌लाई कहिल्यै पुकार्नुभएको छ? प्रायजसो मानिसहरू पुकार्छन्‌। यहाँसम्म कि भगवान्‌मा आस्था नराख्ने कोही-कोहीले समेत भगवान्‌लाई पुकार्छन्‌ अनि प्रार्थना गर्छन्‌। तर प्रश्न उठ्छ, मानिसहरू किन प्रार्थना गर्छन्‌? यससम्बन्धी फ्रान्समा एउटा सर्वेक्षण लिइएको थियो। त्यहाँका आधाजसो मानिसहरू “मनको शान्तिको लागि” प्रार्थना वा ध्यान गर्ने गर्छन्‌ रे! युरोपमा बस्ने धेरैजसो मानिसहरू धार्मिक आस्थाको कारण प्रार्थना गर्ने गर्छन्‌। तर फ्रान्सको कुरा भने फरक छ। तिनीहरू “तनाव कम गर्नका लागि मात्र प्रार्थना गर्ने” गर्छन्‌। अर्कोतर्फ भगवान्‌माथि आस्था राख्ने मानिसहरूचाहिं चाहिएको बेलामा मात्र भगवान्‌लाई पुकार्छन्‌ र आफूले मागेको कुरा चाँडै पूरा होस् भन्ने सोच्छन्‌।—यशैया २६:१६.
तपाईंलाई चाहिं कस्तो लाग्छ? प्रार्थना मनको शान्तिको लागि मात्र गरिन्छ भन्ने लाग्छ कि? सायद तपाईं भगवान्‌मा विश्वास गर्नुहुन्छ होला। के त्यसोभए भगवान्‌ले तपाईंको पुकारा सुन्नुभएको छ? अथवा जति बिन्तीभाउ गर्दा पनि जवाफ पाउनु भएको छैन कि? प्रार्थना मनको शान्तिको लागि मात्र होइन, तर भगवान्‌सित नजिक हुने बहुमूल्य माध्यम पनि हो भन्ने कुरा बुझ्न तपाईंलाई पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले मदत गर्नेछ।
आवरण लेख मानिसहरू भगवान्‌लाई किन पुकार्छन्‌?
आवरण लेख प्रार्थना गर्नै पर्छ र?
बाइबलले जीवनलाई नयाँ मोड दिन्छ उहाँहरूले हरेक प्रश्नको जवाफ बाइबलबाटै दिनुभयो
प्रलोभनको शिकार हुनदेखि बच्न सक्नुहुन्छ
थोमस एम्लिन—धर्मत्यागी या सत्यका समर्थक?
जीवनको उद्देश्‍य के हो?
Text डिजिटल प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा अप्रिल २०१४ | भगवान्‌लाई किन पुकार्ने?
अप्रिल २०१४ | भगवान्‌लाई किन पुकार्ने?
प्रहरीधरहरा अप्रिल २०१४ | भगवान्‌लाई किन पुकार्ने?